नेकपाभित्र गुटैगुट, कसका गुटमा को-को ? [नामसहित] - Everest Dainik - News from Nepal
नेकपाभित्र गुटैगुट, कसका गुटमा को-को ? [नामसहित]
काठमाडौं, असोज ८ । पार्टी निर्णयमा शीर्ष नेताकै असन्तुष्टि देखिनु नेकपामा नौलो कुरा हुन छाडेको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको पार्टी एकता भएकै दिनदेखि वरियताको एजेन्डा उठाएको–उठायै छन्। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी पदबाट राजीनामा नै दिनुपर्ने अवस्था आयो। उनको राजीनामा स्वीकृत हुने प्रक्रियामै पुगेन। अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भन्दैछन्– पार्टीमा आफ्नो पक्षका नेतालाई अध्यक्ष ओलीकै कारण जिम्मेवारीमा भेदभाव गरिंदैछ।
उनी विदेशमा रहेका बेला यता सचिवालय बैठकले प्रदेशका पदाधिकारी र इन्चार्जको जिम्मेवारी बाँडेको छ। यो निर्णय प्रक्रियामा उनको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको त छैन, तर उनी निकट नेताका असन्तुष्टि आउन थालेका छन्। के नेकपाभित्र गुटबन्दी हाबी छ ? आइतबार बिहान नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले हात्तिवनस्थित निवासमा पार्टीका युवा–विद्यार्थीका पदाधिकारीसँग त्यसको केही खुलासा गरे।
नागरिक आन्दोलनका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले उनलाई सुनाएका अभिव्यक्तिको प्रसंग कोट्याउँदै उनले भने, ‘नेकपाभित्र गुटसम्म ठीकै थियो, तर गिरोह नै छ भनेर नागरिक अगुवा पाण्डेले मलाई सुनाउनुभयो, यदि त्यस्तो गिरोह छ भने त्यसले पार्टीलाई कहाँ पुर्‍याउला ? युवा–विद्यार्थीले चिन्ता गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’ अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
नेकपामा कै–कसका छन् गुट ?
नेकपाभित्र दृश्य÷अदृश्य रूपमा ६ नेता वरिपरिका गुट सतहमा देखिएका छन्। त्यसभित्र पनि अन्य उपगुट उत्तिकै छन्। प्रारम्भमा पूर्वघटकका अलग समूह र गुट देखिनु स्वाभाविक हो। तर पूर्वघटकभित्रैका पुराना गुटले एकतापछि समेत निरन्तरता पाइरहेका छन्।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गुट सबैभन्दा बढी बलियो छ। उनको गुटका नेताका अरुका तुलनामा एकढिक्का छन्। महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञावाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गोकुल बाँस्कोटा, भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराईलगायत नेताहरू ओली ‘क्याम्प’का सारथि छन्।
सात प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव गरी २८ पदाधिकारीमध्ये ओली पक्षका १० नेताले जिम्मेवारी पाएका छन्। यस हिसाबले पनि ओली पार्टीमा हाबी छन्। ओलीपछि बलियो गुट छ, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को। तत्कालीन माओवादीका बहुमत नेताहरू उनीसँगै छन्। स्थायी समिति सदस्यहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, चक्रपाणि खनाल, अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल, हितराज पाण्डेलगायत नेता दाहाल वरिपरि छन्। दाहालको गुटभित्र पनि वर्षमान र जर्नादनका उपगुट शक्तिशाली छन्।
शक्ति अभ्यासमा माओवादी समूहभित्र खुल्ला रूपमै यी दुई नेताले अलग–अलग समूह चलाएका छन्। प्रदेश इन्चार्ज तथा पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा अहिले दाहाल खेमाभित्र पनि वर्षमान पुन हाबी भएको चर्चा छ। प्रदेश कमिटी पदाधिकारीमा दाहाल पक्षका ८ नेताले जिम्मेवारी पाएका छन्।
अन्य नेताहरू पनि दाहालकै वरिपरि छन्। तर पात्र भएपनि गुट व्यवस्थापनमा ती नेताहरू निकै कमजोर देखिन्छन्। टोपबहादुर रायमाझीलगायतले अलग गुट अस्तित्वमा देखाउन सकेका छैनन्। कहिले वर्षमान त कहिले जर्नादनसँगै रायमाझीलगायत नेताहरूको सहकार्य र संर्घष चल्दै आइरहेको छ।
मणि थापा, मातृका यादव र देवेन्द्र पौडेलहरू जिम्मेवारीमा खासै खुसी देखिँदैनन्। कुनै न कुनै रूपमा यी नेताका पछाडि सानो समूह छ। तर गुट नै बचाउन सक्ने अस्तित्वमा उनीहरू छैनन्। उनीहरू दाहालसँगै निकट हुन खोज्ने तर वर्षमान र जर्नादनका अगाडि ‘जोर नचल्ने’ अवस्थामा छन्।
तत्कालीन एमाले खेमाभित्र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको अलग्गै गुट छ। पूर्वघटकभित्र बहुमत जिल्ला (४७ जिल्ला अध्यक्ष) को नेतृत्व यो समूहको थियो। स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, लालबाबु पण्डित, जगन्नाथ खतिवडा, राजेन्द्र राईलगायत नेताहरू नेपाल ‘क्याम्प’मा छन्।
ट्याग्स: CPN Group, Group, Gut